Deeqda - NLP - Master & PHD
Master iyo PhD ee Dabiiciga ah Language Processing
6 sano oo cilmi aan ka fikirin lacag
Ma amaah ah • No culayska dheeraadka ah • Balanqaad Dowladda
Sida loo baran Master ama PhD dibadda? Sidee inaad wax ka barato Ameerika? Halkee inaad wax ka barato processing afka dabiiciga ah? Sidee si ay u daabacaan maqaalada cilmiyaysan ee joornaalada top? Halka laga helo deeq waxbarasho wanaagsan ee Master ama PhD? Raadinta si buuxda u maal-meel Master ama PhD?
(Qoraalkan waxaa si toos ah loo tarjumay for laguugu sahlo ka asalka ah Ingiriisi. Waxaan raali wixii qaladaad ah.)
The Language Dabiiciga Processing Laboratory ee Xarunta barashada Kombiyuutarka Research (CIC) Machadka Polytechnic Qaranka (IPN), Mexico City, Mexico, waxay bixisaa tiro kooban oo deeq waxbarasho ardayda caalamiga ah ee muteystay Master ama PhD degree ee Sayniska Kombiyuutarka la sha ah degaanka ee Dabiiciga ah Language Processing. Ka dib markii ay helaan shahaado Master ah, ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay codsadaan heerka PhD ah, iyo (haddii ay dhacaan, caadi ahaan waxay sameeyaan) deeqda waxbarasho waa sida kordhiyay.
Mawduucyada waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, dhammaan meelaha dabiiciga ah Processing Language (NLP), xisaabeed Luuqadaha (Champions League), Human Technologies Language (HLT), iyo meelaha la xiriira. Eeg our publications oo difaacay theses tusaale danaha cilmi our.
Inta deeq: Master ee 600 USD, PhD: 800 USD bishii qiyaastii per (oo ay ku jiraan fasaxyada, halkan la simay kartaa info ee Spanish). Tani waa ka badan intii ku filnayd in kuwa nool iyo kiraysanayso qol ee Mexico City caadiga ah. Deeqdan ma aha amaah ah: aan filayaa in aad soo celiso; adeegga lahayn (sida kaalmada waxbaridda) ayaa loo baahan yahay. Halkan waa bandhig ku saabsan deeq our darbay Hindiya (ugu badan tahay in laga codsadaa in aad gobolka, sidoo kale).
Duration: Master ee, ilaa 2 sano (sida caadiga ah sii kordhiin 2.5 sano), PhD, ilaa 4 sano ah.
Nooca barnaamijka: Research. Labada barnaamijba waxaa u janjeedha inay cilmi sayniska iyo daabacaadda halkii ay u hagaajinta xirfadaha barnaamijyada aad.
Shaqada: Inta qalin PhD noo shaqeeya jaamacadaha iyo governmentally maalgeliso cilmi baarista, in kastoo ay jiraan sheekooyinka guusha shaqada ee shirkadaha top. ardayda Our MSc caadi ahaan sii wadaan inay heerka PhD ah, kuwa go'aansaday inaan sii, shaqeeya jaamacadaha ama warshadaha.
Admission: halkan waa sharaxaad of our habka gelitaanka, laakiin fadlan akhri on; waxaad ka heli doontaa link isla hoose ee boggan.
Maxaad waxbarasho ee CIC?
Certification: Labada our PhD iyo barnaamijyada Master ee waa mid ka mid ah barnaamijyada aad u yar ee Mexico shahaado Dowladda barnaamij heer-caalami ah oo heer sare ah.
Elite: CIC waa xarun cilmi baaris aqoonyahanada, xarunta keentay qaranka cilmi Science Computer.
Future: Ku dhowaad dhammaan of our qalin PhD yihiin macalimiinta ama cilmi jaamacadaha wanaagsan, qaar ka mid ah la degree post-doctorate. Inta badan oo iyaga ka mid ah ayaa gaari ay wax soo saarka shahaado muhiim ah Cilmi Qaranka ee Mexico. Qaar badan oo ka mid ah ka qalin Master ee sii wadaan in ay bartaan degree PhD, qaar ka mid ah na soo raac iyo qaar ka mid ah Yurub, tusaale ahaan, in UK ama France.
Tayada: Qaar badan oo ka mid ah ardayda heshay abaalmarinta muhiim ah; seddex ka mid ah heshay a Billada dahabka ee gacmaha Madaxweynaha dalka oo ka mid ah xitaa helay Latin America Microsoft Research Fellowship.
Nala Xiriir: Waxaan si firfircoon uga shaqeeyaan kooxaha cilmi fiican ee Europe, USA, Asia, Africa, iyo Latin America.
Fursadaha: Dhowr ardayda ka soo gudubtay layliyo ee Microsoft, Oracle, Yahoo!, iyo Xerox. Waxaan ku siin maalgelinta layliyo ugu fiican jaamacadaha caalamiga ah.
Ku guuleysiga: Ardayda Our ayaa ku guuleystay tartamada caalamiga ah ee hababka iyo algorithms.
La taliyayaasha: Professor Our leeyihiin heer sare ah record daabacaadan, waa aqoonyahano ah Academy Mexico ee Sayniska iyo Cilmi Qaranka ee Mexico ee heer heer sare 3 (sarreeya) ama 2 (labaad ee ugu), iyo sidoo kale helay abaalmarinta muhiim ah.
Maalgelinta: Ardayda waxaa la siiyaa maalgelinta ka qeybgalo shirarka (gayiga qaranka iyo in dacwooyinka qaarkood dibadda), iyo sidoo kale daabacaadda ee joornaalada sare oo u baahan lacag.
Dhaqdhaqaaqa: waxay ardayda ka qayb urur ee shirarka caalamiga ah oo waaweyn sida CICLing ama MICAI iyo caawin taliyayaal ay hawlaha kale ee muhiimka ah, sida sixiddiisa joornaalada la qaderiyo: CyS, IJCLA, POLIBITS, kuwaas oo Professor of our shaybaarka waa Editors-in-Chief.
Alkumay: Waxaan heysanaa koox caalami ah Professor iyo ardayda. Barnaamijkayagu PhD ayaa Professor ka iyo Laboratory uu leeyahay ama uu ardayda ka . Professor lagu kormeerka ama kormeero theses in .
Jawiga Friendly: Professor waa waxtar iyo ardayda waa ciyaar saaxiibtinimo, waxaan oo dhan ay yihiin saaxiibo wanaagsan.
Freedom: Ardayda Our dooran mawduuca ay jecel yihiin; waxaan qabsan doonaa in danahaaga. Waxaan sidoo kale waa deeqsi ah sida in ay ka qayb, maalmood ama imtixaanada, iwm
Dalxiiska: Mexico waa dal aad u xiiso badan oo qalaad, hodan ku ah taariikhda, dhaqanka, iyo dabeecadda. Timaadeen inaad aragtaan wax ka duwan meel gurigaaga!
Xagaaga weligeed ah: In dhexe ee dhaxan jiilaalka ee Waqooyiga, aad ku raaxaysan doonaa qorraxda, iyo Timir. Marna ha qabow iyo ku dhowaad marnaba aad u kulul.
Ma u baahan tahay sababo dheeraad ah? Kaalay oo aad u ogaatid naftaada.
Publications shirarka muhiim ah ama joornaalada.
cilmi-baarista caalamiga ah joogo jaamacadaha ugu sareeya.
Marka qalin, galaya barnaamijka PhD ah, nala ama jaamacadaha kale keentay.
Record daabacaadan Strong ee joornaalada top.
Maamuusta degree iyo abaalmarino kale ee qaranka iyo kuwa caalamiga ah.
Marka qalin, helitaanka horyaalka ee Cilmi Qaranka ee Mexico ama wax u dhigma ee dalka.
Dan xoog badan, is-dhiirogelin, madaxbannaanida waxbarashada iyo cilmi-baarista.
Xiisaha Research gaar ah ee Processing Language Dabiiciga ah ama meelaha la xiriira, sida ay topic cilmi-aad soo jeedin ah.
Go'aan Absolute dhammayn barnaamijka: mar qirtay, waa in aad ku dhameysan barnaamijka iyo hesho heerka.
Barnaamijyada ama xirfadaha scripting (heerka codsiga) waxaa looga baahan yahay, in kastoo ay dhacdo PhD laga dhaafi kari waayay, iyadoo diyaar u ah inay bartaan luqadda programming ah sida lagu tukan jiray.
Aqoon aasaaska u ah computer science, sida dhismayaasha xogta, algorithms, luqadaha barnaamijyadooda; aqoon wanaagsan ee farsamooyinka barnaamijyada waa lagu daray weyn.
Aqoon Ingiriisi Wanaagsan: akhriska iyo qoraalka ee domain sayniska-farsamo.
Diyaar u daabacaan waraaqaha cilmiga ah ee joornaalada top. Diyaar si ay u bartaan qoraalka iyo daabacaadda dhaqanka. Waayo, PhD, daabacaadan ee joornaalada ISI JCR-eegid waxaa looga baahan yahay qalin-jabinta.
Diyaar u ah inay ka qayb qaataan hawlaha Lab ah, sida ururka of shirarka, iyo guud ahaan rajaynayaan in ay caawiyaan waa lagu daray.
Diyaar u ah inay bartaan Isbaanish waa lagu daray, waayo, taasu aad bay u fududayn lahaa noloshaada halkan. Ogaanshaha Spanish ka hor aan loo baahnayn.
Dulqaad: codsanaya barnaamijka caalami ah u baahan karaan waraaqaha badan, oo ay ku jiraan turjumaadaha certified, iwm
Dhammeeyey degree hore la dhibcaha wanaagsan yahay, Waayo Master ee, ku dhameysatay heerka BSc, waayo, PhD, dhameysatay heerka Master ee (laga yaabo in kastoo musharrax xoog Galin shahaadada BSc).
Dhaadhacsan. Waa maxay tallaabada xigta?
La xiriir professor ah oo aad jeceshahay in aad leedahay sida la taliye: Alexander Gelbukh, Grigori Sidorov, Ildar Batyrshin, ama Xiiraam Calvo (mid dooro oo keliya, soo gudbiyeen oo isku mar la diidi doonaa). Fadlan ka mid ah:
CV la diiwaankaaga daabacaadan dhamaystiran (haddii ay jirto) iyo xirfadaha (haddii ay jirto), ka mid ah macluumaadka kale ee la xiriira. Lifaaqaaya shahaado iyo score dhibcaha shahaadada hore ee uu noqon doono mid waxtar leh.
Maxaad aad rabto in ay ka shaqeeyaan degaanka ee NLP? Maxaad ka taqaanaa waxa ku saabsan, ama waxa aad waayo-aragnimo ku saabsan mawduucyo la xiriira yahay?
Maxaad si gaar ah ha aad rabto in aad barato CIC? Maxaad ka filan?
Waa maxay qorshaha aad ka dib markii aad u qalin? Tusaale ahaan, haddii aad codsato Master ee, ma waxaad qorshaynayaan in ay sii wadaan in ay PhD?
Eeg our abaalmarinta bogga; magacaaga ku iftiimin doonaa on dul dhameysteen? Sida aad inoo caawin doono in ay sii wanaajiyo qayb ka mid ah ardayda helitaanka sharaf iyo abaalmarinta?
Mawduuca: ha aad qabto wax fikrad u gaar ah aad sha? Haddii ay sidaas tahay, fadlan nala soo faahfaahin qaar ka mid ah. document A gaar ah la soo jeedinta cilmi baarista ah waa lagu daray, gaar ahaan PhD.
Haddii aan u xaqiijineynaa in aan aad u aragto musharax xoog, fadlan raac tallaabooyinka ku xusan in aan sharaxaad of our Qaabka meelaynta (hadda waxaan u qoray inta badan heerka PhD, na weydiiso tilmaamaha MSc). Fadlan si xor ah nala soo xiriir haddii shaki.
Su'aalo: Alexander Gelbukh.